SEO Ụdị: All And More Site Semalt
SEO na-anọchite anya "njikarịcha search engine." Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa ị ga-esi nweta okporo ụzọ okporo ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ikwu na search engine njikarịcha bụ ụzọ ị ga-esi na-eleta ndị ọbịa na-ahụ maka ihe ndị dị na ibe weebụ. All engines ọchụchọ dị ka Bing, Yahoo, na Google, bụ ndị bụ engines engines, jiri usoro dị iche iche wepụta ibe weebụ, ederede ọdịnaya, vidiyo na saịtị na nsonaazụ ha. Ị nwere ike nweta ọkwa dị elu na njikwa search engine nanị mgbe ị mere nke ọma njikarịcha search engine. Ọ bụ usoro a kwụrụ ụgwọ, ma ị ga-adị njikere itinye ego nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ saịtị gị na ibe mbụ nke Google ma ọ bụ ndị ọzọ search engines - i need to talk to a computer expert.
Lisa Mitchell, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ Ụlọ Elu Ọrụ Ntanetị, na - enye nkọwa zuru ezu banyere ụdị SEO na mkpa ha.
E nwere atọ n'ime ha: akpụkpọ ụkwụ ọcha SEO , nwa ojii SEO , na SEO isi awọ.
Oke okpu SEO bụ usoro a kasị mara amara na nke a na-ejikarị eme ihe iji meziwanye ọnọdụ ịchọta engine gị..Ọ gụnyere ụfọdụ usoro na ụzọ iji mee ka saịtị gị hụ na nsonaazụ ọchụchọ. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-ederede ọdịnaya ọdịnaya, gụnyere ụfọdụ isiokwu, ebuli ebe nrụọrụ weebụ gị, HTML kachasị na mezigharite saịtị gị dị ka iwu na ụkpụrụ Google. Nke ahụ ga - enyere gị aka inwe ọhụụ mara mma n'ime ọnwa ole na ole. N'aka nke ọzọ, SEO ojii ojii bụ obere oge iji nweta ọkwa dị mma na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụghị usoro dị ogologo oge ma nwee ọtụtụ ụba. Ọ na-agụnye ụlọ njikọ na-adịghị ekwekọghị , na-edegharị ọdịnaya na iji ọrụ arụmọrụ nke saịtị. Ọ na-agụnyekwa nri nri, ederede zoro ezo, na njikọ dị iche iche yana ịchọta. Seo na-acha uhie uhie SEO bụ ihe jikọrọ ya abụọ SEO na nwa ojii SEO. Na usoro a, ị pụghị iji ụzọ dị mma iji nweta ọkwa dị elu na engines na-achọ, ma ọ bụ usoro na-ezighị ezi na-arụ ọrụ zuru ezu. Ndị ọrụ SEO na-eji usoro a eme ihe n'ọtụtụ ebe na-agụnye ọtụtụ ọrụ dị mma ma na-adịghị mma.
N'ihi na ònye ka onye ahụ dị mma?
Nyochacha njikwa search bụ ụzọ dị mma iji mee ka ọtụtụ ndị mmadụ gaa na saịtị gị ma mụbaa ahịa gị. Ọ bụ ụzọ dị mma maka ndị chọrọ inye ahịa ha ọhụụ ọhụrụ. Ọ dị mma ikwu na ụwa jupụtara na ịntanetị ọtụtụ narị na ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ mgbe asọmpi ahụ siri ike, ọ gaghị ekwe omume ka ụlọ ọrụ azụmahịa gị dịrị ndụ n'enweghị SEO. Ikwesiri izere itinye nnukwu ego na mgbasa ozi na mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Kama nke ahụ, ilekwasị anya gị kwesịrị ịdị na-ewulite njikọ dị mma na saịtị gị, na-ede ederede search engine-enyi na enyi, na ịmepụta saịtị gị dịka iwu na iwu Google.
Nchọpụta njin search engine ma ọ bụ SEO ekwesịghị ikwe ka ejiri ya kpọrọ ihe. Ọ dị mkpa maka azụmahịa ọ bụla. Ọ gụnyere ọtụtụ usoro, usoro, na usoro. Ị ga-aṅa ntị na SEO ma na-ewepụ SEO. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ saịtị gị na peeji mbụ nke Google ma chọọ ịmalite ịzụ ahịa gị, ị ghaghị ịga na njikwa njikwa search engine ma jiri ego na-akwụ ụgwọ ọkachamara SEO.